Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya zisuka eNur-Sultan zisiya eBishkek ngeAir Astana ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • Iindaba zaseKyrgyzstan • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iinqwelomoya zisuka eNur-Sultan zisiya eBishkek ngeAir Astana ngoku.
Bonke abakhweli abaya eKyrgyzstan, kuquka nabemi beRiphabhlikhi yaseKyrgyzstan, abantwana ababudala buyiminyaka emithandathu kunye nabakhweli abahambayo, kufuneka baveze isatifikethi sePCR esineziphumo ezibi, novavanyo olwenziwa kwisithuba seeyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba. Abakhweli abagonywe ngokupheleleyo bakhululwe kulo mqathango.
I-Air Astana izakuphinda iqalise iinqwelomoya eziya ngqo kwikomkhulu laseKyrgyzstan, eBishkek ukuqala nge-17 kaNovemba ka-2021.
I-Air Astana iza kusebenzisa inqwelomoya ye-Embraer E190-E2 kwiNur-Sultan, Kazakhstan – Bishkek, indlela yaseKyrgyzstan.
INur-Sultan – Iinqwelomoya zaseBishkek ziya kuqala ukusebenza kabini ngeveki ngooLwezithathu nangeeCawe.
I-Air Astana iya kuphinda iqalise iinqwelomoya ezisuka eNur-Sultan ukuya kwikomkhulu laseKyrgyzstan, eBishkek nge-17 kaNovemba ka-2021.
Iinkonzo ziya kuqala ukusetyenziswa kusetyenziswa Inzululwazi yasemoyeni Embraer Inqwelomoya ye-E190-E2 kabini ngeveki ngooLwezithathu nangeeCawe, kunye nezandi ezongezelelweyo ezimbini ngoMvulo nangooLwezihlanu ziqala ngoDisemba.
Iinkonzo phakathi kweAlmaty ukuya eBishkek sele zisebenza yonke imihla.
Embraer Inqwelomoya ye-E190-E2 inoqoqosho lwe-premium kunye nohlengahlengiso lweklasi yeklasi yoqoqosho, kunye nabakhweli bezoqoqosho lwe-premium babonelelwa ngokubaluleka kokungena kunye nokukhwela, ukunyuka kwesibonelelo somthwalo, imenyu yeklasi yeshishini kunye nokufikelela kwindawo yokuphumla yoshishino.
Inzululwazi yasemoyeni ophethe iflegi yaseKazakhstan, ese-Almaty. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo, zasekhaya nezamazwe aphesheya kwiindlela ezingama-64 ezisuka kwindawo yayo ephambili, kwisikhululo seenqwelomoya iAlmaty, nakwiziko laso lesibini, kwisikhululo senqwelomoya saseNursultan Nazarbayev.